DEG DEG:- Wafdi uu hogaaminaayo Ugaaska beesha Xawaadle oo Muqdisho soo gaaray (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Wafdi uu hogaaminaayo Ugaaska beesha Xawaadle oo Muqdisho soo gaaray (SAWIRO)
Waxaa goordhaw garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi uu hogaaminaayo Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo ka mid ah duubabka dhaqanka ugu waaweyn Soomaaliya.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa wafdiga Ugaaska kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogeyn uljeedka rasmiga ah ee ka dambeysa safarkiisa.
Ilo xog-ogaal ah ay heleyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu la kulmi doonno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaarihiisa Xasan Cali Kheyre.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa la sheegayaa inuu ka qeyb qaadan doonno wadatashiyada dhismaha golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ay madaxweynaha iyo ra’iisul wasaarihiisa kala yeelan doonaan odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed.
Sidoo kale, Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxa uu kulamo la qaadan doonaa xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Dhinaca kale, Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa lagu xasuustaa inuu si weyn uu uga soo horjeestay ka qeyb-galka dhismaha maamulka Hirshabeele ee maamulka loogu sameeynayay gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaarihiisa Xasan Cali Kheyre ayaa maalmihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho ka waday wadatashiyo ku aadan dhismaha golaha wasiirada cusub, waxaana la filayaa in maalmaha soo socdo wasiiradaasi si rasmi ah loogu dhawaaqo.